लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा शिशु स्याहार्न ‘सुसार’ कार्यक्रम – Health Post Nepal
२०७७ असार ११ गते २०:३२
बुटवल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा शिशु स्याहारका लागि ‘सुसार’ परियोजना सुरु भएको छ। शिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले परियोजना शुरु गरिएको अस्पताल र परियोजना संचालन गर्ने संस्था गोल्डेन कम्यूनिटीले जनाएको छ।
मातृ तथा नवजात शिशुको स्याहारको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले परियोजना सुरु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले बताए।
परियोजनाले गुणस्तरीय सेवा सुधार अन्तर्गत अस्पतालको विद्यमान मातृ तथा शिशु स्याहार सेवालाई ज्ञान सीप तथा प्रविधिहरु प्रयोगमा ल्याई नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी ल्याउनेछ।
प्रसुति सेवालाई प्रभावकारी ढंगले निगरानी गर्न, सेवा प्रदान गर्न तथा समयमै उचित निर्णय लिन सुसार कार्यक्रमले स्वास्थ्यकर्मीलाई सशक्त बनाउने परियोजनाले दाबी गरेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको अघिल्लो हप्ताको प्रसुतिको अवस्था विश्लेषण गर्दा त्यस हत्पा १०४ जना शिशु जन्मिएका थिए।
त्यसमा ४ जना आमाको पेटभित्रै बिग्रीएको अवस्थाका, ८ जना कम तौल भएका र ४ जनाले श्वास फेर्न नसकेको अवस्थाका थिए। ति ४ जनालाई कृत्रिम स्वास दिइएकोमा ३ जना ठिक भएको डा. राजेन्द्र खनालले बताए।
उनका अनुसार ती जन्म दिएका शिशुका ९५ जनाले एक घण्टाभित्र स्तनपान गराएका थिए। नेपालमा हरेक बर्ष ६ लाख बच्चा जन्मिएकोमा ११ हजार शिशु मृत अवस्थामा जन्मिने र १३ हजार नवजात शिशु जन्मेको एक महिना नपुग्दै मर्ने गरेको तथ्यांक रहेको छ। करिब १७ प्रतिशत शशिुहरु जन्मेको पहिलो घन्टामा, ५७ प्रतिशत जन्मेको पहिलो दिनमा र ७९ प्रतिशत जन्मेको पहिलो हप्तामा मर्ने गर्दछन्।
नवजात शिशुको मृत्युको कारणहरुमध्ये महिना नपुगी जन्मनु ३१ प्रतिशत, जन्मनासाथ सास फेर्ने नसक्नु २३ प्रतिशत र संक्रमण हुनु १९ प्रतिशत छ। नेपाल सरकारले नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २१ लाई सन् २०३० सम्ममा प्रतिहजार जिवित जन्ममा १२ र मृत जम्ने शिशुको दरमा प्रतिहजार जन्मलाई १३ मा घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
यस परियोजनाले सरकारको त्यस लक्ष्यलाई सघाउने गरी काम गर्ने परियोजना संचालन गर्ने संस्थाले जनाएको छ। परियोजनाको संचालन गर्ने संस्था गोल्डेन कम्यूनिटीले लुम्बिनी प्रोदेशिक अस्पताल सहित सातै प्रदेशका ८ वटा अस्पताललाई लक्षित गरि कार्यक्रम गरिने जानकारी गराएको छ।
अहिले अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्नेगरी हेल्पिङ वेविज सरभाइभ (एचकिएस) तालिम संचालन गरिरहेको गोल्डेन कम्यूनिटीकी संचार विज्ञ सिर्जना शर्माले जानकारी दिइन्। कम्यूनिटीले बुटवलमा पत्रकारहरुलाई परियोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत गरेको छ ।